Amathuluzi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokukhetha ihlumela leqhwa: amathiphu namasu
Lapho kuqala ubusika, kuvame ukudingeka ukuze ususe iqhwa: egcekeni lendlu yangasese, eduze negaraji, e-cottage ehlobo, phambi kwesitolo sayo. Kodwa uma ihlumela leqhwa lingalungile, le nqubo ingaba yinselele yangempela kuwe. Ngakho-ke, kufanelekile indlela enomthwalo wemfanelo ekukhethweni kwe-snowplow, futhi lesi sihloko sizokusiza ngalokhu.
Ungayisebenzisa kanjani futhi unakekele isandla scythe
Iningi labantu abahlanganyela emisebenzini yezolimo sebenzisa i-scythe ngesandla. It isetshenziselwa ukutshala utshani for hay, ukudla izilwane, ukulinganisa utshani. Ukuphepha kanye nenkonzo ende, kubalulekile ukwazi ukugunda nokunakekela isandla ngesandla scythe. Idivaysi nezinsimbi eziyinhloko I-braid manual iqukethe: ummese, i-kosovishche, isibambo, umcengezi nendandatho.
Sakhetha isikebhe esibukwayo: izinketho zokukhetha
Isidingo sokwenza imisebenzi encane yasendlini ivela kaningi, futhi amathuluzi kagesi asebenzayo, ahlale eseduze, ahlinzekele le nqubo. Elinye lamathuluzi, esikhundleni sentaba yezibuko ezingadingekile ezingadingekile, i-screwdriver. Uyakwazi ukusiza masinyane futhi ngaphandle komzamo wokwenza umsebenzi wangaphakathi, futhi ukubuyekezwa kwethu kanye nekhwalithi yekhwalithi "njengomsizi" kuzokwenza kube lula ukukhetha lapho uyithenga.
Indlela yokwenza ifosholo yeqhwa ekhaya
Abaningi bayajabula lapho kufika ubusika ngeengubo zayo ezimhlophe zeqhwa. Futhi nakuba ukuhlonipha imifula yasebusika kuletha imimoya ephakeme, le nkathi nayo ihlotshaniswa nezinkinga ezengeziwe: lapho iqhwa liwela kakhulu, kwenza kube nzima ukuhamba egcekeni futhi ushiye imoto ngaphandle kwegaraji. Futhi, iqhwa lingavinjelwa ukufaka iminyango endlini.